Sarkaal Ciidan oo lagu Dilay Afgooye – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Tuuryare 18 February 2019 18 February 2019
Wararka laga helayo degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha hoose ayaa waxa ay sheegayaan in degmadaasi lagu dilay Sarkaal ka tirsan Ciidamada Dowladda Soomaaliya.
Sarkaalka oo Goobjoogayaal ay sheegeen in uu ka tirsanaa Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed ayaa lagu dilay Xaafada Damaley oo ka tirsan degmada Afgooye,iyada oo dadkii ka dambeeyay dilkiisa ay goobta ka baxsadeen.
Sarkaalka la dilay ayaa caanka ahaa demada Afgooye,waxaana lagu Magacaabi jiray Cabdi Abuukar Cali oo loo yaqaanay (Waa Kaa Hayaa) sida ay u sheegeen Risaala dad ku sugan degmada Afgooye ee Gobolka Shabeelaha Hoose,waxaana mas’uuliyida dilkaasi sheegtay Al-Shabaab.
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska ayaa tegay goobta dilka uu ka dhacay,kuwaas oo sameeyay baaritaano aan wax natiij ah kasoo bixin,iyada oo dilka ka dhacay degmada Afgooye aysan weli ka hadlin Maamulka degmada iyo saraakiisha ciidamada intaba.
Degmada Afgooye ayaa waxa ay ka mid tahay degmooyinka Gobolkaaasi Shabeellaha hoose ay inta badan dilalka ka dhacaan,waxaana mas’uuliiinta Maamulka degmada ay sheegaan inay waxka qaban doonaan balse aysan ku guuleysan.